बाइबलमा ट्रिनिटी - विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड
भगवान > अनन्त > बाइबलमा त्रिएक छ?
के तपाईं बाइबिलमा ट्रिनिटी पाउन सक्नुहुन्छ?
जसले त्रिएकको शिक्षा ग्रहण गर्दैनन् यसलाई यसलाई अस्विकार गर्दछन् किनकि "त्रिएक" शब्द धर्मशास्त्रमा पाइँदैन। निस्सन्देह, त्यहाँ कुनै पद छैन कि "भगवान तीन व्यक्ति हुन्" वा "भगवान एक त्रिएक हो"। कडा शब्दहरुमा, यो सबै धेरै स्पष्ट र सत्य छ, तर यसले केहि पनि प्रमाणित गर्दैन। इसाईहरूले प्रयोग गरेका धेरै यस्ता शब्दहरू र अभिव्यक्तिहरू छन् जुन बाइबलमा पाउँदैनन्। उदाहरण को लागी, "बाइबल" शब्द बाइबलमा भेट्टाउन सकिदैन।
यसबारे थप कुरा: त्रिएक सिद्धान्तका विरोधीहरूले दाबी गरे कि परमेश्वर र उहाँको प्रकृतिबारे त्रिएकवादी दृष्टिकोण बाइबलले प्रमाणित गर्न सक्दैन। किनकि बाइबलका पुस्तकहरू ईश्वरशास्त्रीय ग्रन्थहरूको रूपमा लेखिएका थिएनन्, यो सतहमा सत्य हुन सक्छ। धर्मशास्त्रमा कुनै भनाइ छैन कि "ईश्वर तीन व्यक्तित्वहरू एक व्यक्तित्वमा छन्, र यो प्रमाण यहाँ छ ..."
यहाँ धर्मशास्त्रका तीन खण्डहरू छन्, एउटा येशूको ओठबाट र अर्को दुई प्रमुख प्रेरितहरू, जुन सबैले बेग्लाबेग्लै ईश्वरका तीन व्यक्तित्वहरूलाई एक साथमा ल्याएको छ। तर यो केवल उस्तै अंशहरूको नमूना हो। यी अन्य मध्ये निम्न हुन्:
नयाँ नियमका यी शास्त्रपदहरूले त्रिएकको शिक्षा वास्तवमा केवल चर्चको इतिहासमा मात्र विकसित भएको हो भन्ने आरोपलाई खण्डन गर्दछ र यसले बाइबलका विचारहरू नभई “मूर्तिपूजक” झल्काउँछ। जब हामी धर्मशास्त्रलाई खुला मनले हेर्दछौं जब यसले हामीलाई परमेश्वर भनेर चिनिन्छ भन्ने कुराको बारेमा के भन्छ, यो स्पष्ट छ कि हामी प्रकृतिमा त्रिएकवादी देखाइएको छ।
हामी विश्वस्त भई भन्न सक्छौं कि ट्रिनिटी परमेश्वरको आधारभूत प्रकृतिसम्बन्धी सत्यको रूपमा सधैं एक वास्तविकता भएको छ। सायद यो पुरानो नियमको अवधिमा पनि मानव अन्धकार युगमा पूर्ण रूपमा स्पष्ट थिएन। तर परमेश्वरको पुत्रको अवतार र पवित्र आत्माको आगमनले परमेश्वर त्रिएकवादी हुनुहुन्छ भनेर देखायो। पुत्र र पवित्र आत्मा हाम्रो संसारमा ईतिहासका केही खास बिन्दुहरूमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै ठोस तथ्यहरूको माध्यमबाट यो प्रकाश दिइयो। ऐतिहासिक समयमा ईश्वरको त्रिएकको प्रकटीकरणको तथ्यलाई मात्र पछि परमेश्वरको वचनमा वर्णन गरिएको थियो जसलाई हामी नयाँ करार भन्छौं।
क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट जेम्स आर व्हाइटले आफ्नो पुस्तक दि बिर्सिएको ट्रिनिटी लेखेका छन्:
रोम १ 14,17: १-18-१:
किनभने परमेश्वरको राज्य खाने र पिउने होइन, तर न्याय, शान्ति र पवित्र आत्मामा आनन्द हो। १ Whoever जसले यसमा ख्रीष्टको सेवा गर्छ, उसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ र मानिसहरूले उहाँलाई आदर गर्दछन्।
म अयहूदीहरूको बीचमा येशू ख्रीष्टको एक सेवक बन्न सक्छु। म परमेश्वर समक्ष परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न सक्छु ताकि अन्यजातिहरूले परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्ने बलिदान बन्न सकून्, पवित्र आत्माद्वारा पवित्र पारिदिनु भयो।
१ कोरिन्थी २: २--1:
किनकि मैले सोचेको थिएँ कि तिमीहरूका माझमा केहि पनि थाहा छैन तर क्रूसमा टाँगिएको येशू ख्रीष्ट। You तर म तिमीहरूसित कमजोर थिएँ र मलाई डर थियो र डरले थरथर कामिरहेको थियो। And तर मेरो वचन र मेरो उपदेश मानव ज्ञानको प्रेरणादायी शब्दहरूको साथ आएको होइन तर आत्मा र सामर्थ्यको प्रदर्शनमा3ताकि तपाईंको विश्वास मानव बुद्धिमा नभई परमेश्वरको शक्तिमा आधारित थियो।
१ कोरिन्थी :1:११:
र तपाईहरु मध्येका कोही हुनुहुन्छ। तर अब तिमीहरू धोइएका छौ, पवित्र बनाइएका छौ र हाम्रा प्रभु ख्रीष्टको नाम र हाम्रा परमेश्वरको आत्माद्वारा धर्मी बनाइएका छौं।
त्यहाँ विभिन्न उपहार छन्; तर यो भूत हो। And र त्यहाँ विभिन्न कार्यालयहरू छन्; तर यो एक सज्जन मान्छे हो।5र त्यहाँ विभिन्न शक्तिहरू छन्; तर यो परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सबै कुरामा काम गर्नुहुन्छ।
१ कोरिन्थी २: २--2:
तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले हामीलाई आफूसँगै ख्रीष्टमा दृढ तुल्याउनुहुन्छ र हामीलाई अभिषेक गर्नुभयो २२ र छाप लगाइदिनुभयो र प्रतिज्ञाको रूपमा हाम्रो हृदयमा आत्मा दिनुभयो।
किनकि तपाईं बच्चाहरु हुनुहुन्छ, भगवानले उसको छोराको आत्मा हाम्रो हृदयमा पठाउनु भएको छ, जसले कराउँदछन्: अब्बा, प्रिय बाबु!
एफिसी २: १ 2,18-२२:
किनभने उहाँ मार्फत हामी दुबै दिमागमा पिताको पहुँच छ। १ So त्यसैले तपाईं अब पाहुना र विदेशी बन्नुभएन, तर सन्त र परमेश्वरका सँगी नागरिकहरूका सह-नागरिकहरू, २० प्रेषितहरू र भविष्यवक्ताहरूको आधारमा निर्माण गरियो, किनकि येशू ख्रीष्ट आधारशिला हुनुहुन्छ, २१ जसमा पूरै संरचना पवित्र मन्दिरमा एकीकृत भएको छ। प्रभुलाई। २२ उहाँद्वारा तिमीहरू पनि आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनेछौ।
एफिसी २: १ 3,14-२२:
यसैले म बुबासामु घुँडा टेकिन्छु, १ who जो स्वर्गमा र पृथ्वीमा बच्चाहरूको अर्थ सबैभन्दा माथि सही बुबा हुनुहुन्छ, १ that कि उहाँ तपाईंलाई आफ्नो महिमाको समृद्धि पछि आन्तरिक मानिसमा आफ्नो आत्माको माध्यमबाट बलियो हुन बल दिनुहुन्छ। , १ that कि ख्रीष्ट विश्वासको माध्यमबाट तपाईंको हृदयमा बस्नुहुन्छ र तपाईं जरा हुनुहुन्छ र प्रेममा स्थापित हुनुहुन्छ। १ So यसैले तपाईं सबै सन्तहरूसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ कि चौडाई, लम्बाई, उचाई र गहिराई के हो, १ also साथै, ख्रीष्टको प्रेमलाई पनि मान्यता दिनुहोस्, जसले सबै ज्ञानलाई भन्दा माथि जान्छ, ताकि तपाईं परमेश्वरको सारा पूर्णताले भरिपूर्ण हुन सक्नुहुन्छ।
एफिसी २: १ 4,4-२२:
शरीर र आत्मा, तथापि तपाईंलाई बोलाइन्छ, तपाईंको व्यवसायको लागि आशा गर्न; One एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटा बप्तिस्मा; A परमेश्वर र सबैका परमेश्वर जो सबैका लागि हुनुहुन्छ र सबैमा र सबैमा।
[सुसमाचार] जुन तपाईं समक्ष आउनुभएको छ, जुन यो विश्वभरि फल फल्छ, र जब तपाईं यो सुन्नुभयो र परमेश्वरको अनुग्रहलाई सत्यमा मान्यता दिनुहुन्छ त्यस दिनदेखि तपाईंसँग बढ्दै जान्छ। Ep हाम्रा प्रिय सँगी सेवक इपाफ्रासले पनि यो कुरा सिकेका हुन्, जो तपाईंहरूका लागि ख्रीष्टका विश्वासी सेवक हुन्, who जसले आत्मामा तिमीहरूको प्रेमको बारेमा हामीलाई पनि भने।
१ थिस्स १.1--1,3:
अनि हाम्रा पिता परमेश्वर प्रति विश्वास र विश्वासले गरेको कार्य, हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको आशामा तपाईको धैर्य र धीरजको बारेमा सोच्नुहोस्। Dear प्रिय भाइहरू, भगवान्‌लाई माया गरेर, हामी जान्दछौं कि तपाईंहरू चुनिएकाहरू हुनुहुन्छ। Because किनकि हाम्रो सुसमाचारको प्रचार वचनमा मात्र होइन, शक्ति, पवित्र आत्मा र ठूलो निश्चयतामा तपाईंमा पनि आयो। हामी जान्दछौं कि हामी तपाईंको बीचमा कसरी व्यवहार गयौं।
१ थिस्स १.2--2,13:
दाज्यू-भाइहरू र दिदी-बहिनीहरू! प्रभुले तिमीहरूलाई माया गर्नु भएको छ र तिमीहरूले उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौ। पवित्र आत्माद्वारा पवित्र बनाउनु भयो र सत्यमाथिको विश्वासद्वारा उहाँ सर्वदा हुनुहुन्छ भन्ने पनि हामीले पहिलो पल्ट भन्नु भएको छ। हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा प्राप्त गर्नुभयो।
तर जब हाम्रा उद्धारकर्ता परमेश्वरप्रति दया र प्रेम देखा पर्‍यो, he उनले हामीलाई बचाए - हामीले गरेको न्यायको खातिर होइन, तर उहाँको दया पछि - पवित्र आत्मामा पुनर्जन्म र नवीकरणद्वारा, through जुन उहाँ हाम्रा मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट मार्फत हामीमाथि प्रशस्त खन्याइएको छ।